Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya oo shir jaraa'id ku qabtay Mogdisho.
Posted by admin on April 01 2011 12:11:45
Mogdisho:(hiranstate.com)-Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya oo aduunyada ugu baaqay iney garabsiiyaan gudiyadii uu soo dhisay,halka madaxweyanaha iyo R/wasaaraha Somaliya ay kala jabiyeen culimada Ahalusuna ee gobolada dhexe si aysan shirka Kenya uga qeyb galin aduunyadana u tusiyaan ineysan Ahlusuna aheyn awood jirta.
Mogdisho: (hiranstate.com)- Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya ayaa muran badan kedib ku guuleystay inuu soo dhiso gudi hoosaadyo uu ka mid yahay gudi soo diyaariya qaabka ugu haboon ee ay doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya ku dhici karto. kedib wareysiyo iyo xog aruurin aanu sameynay 24kii saac ee inadhaaftay ayey inoo xaqiijiyeen garyaqaano Somaliyeed in wadada uu ku socdo gudoomiyaha baarlamaanka ilaa hada siyaasad ahaa tahay mid banaanka u soo saareysa midabka rasmiga ah ee xukumada Farmaajo iyo madaxweyne Shariif oo ay sheegeen ineysan haba yaratee wax siyaasad ah oo u bilaaban jirin.
Qareenadani ayaa fikirkooda ku sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka hadii isagoo aan ku dhawaaqin gudigii doorashada soo qaban qaabin lahaa uu Kenya aadi lahaa ay ku adkaan laheyd sidii uu aduunyada ugu dhaadhiciyo howlaha baarlamaanka, Laakinse ayey leeyahiin hada ma jirto cid hor istaagi karto howlaha baarlamaanka siyaasad ahaane gudoomiyaha waxuu u muuqal ek yahay nin si wanaagsan u dersay hogaanka dalka ee ay ula jeedaan Farmaajo iyo Shariif.
Fashilka rasmiga ah ee xukumada Farmaajo iyo madaxweyne Shariif oo maraya heer shacabka Somaliyeed kala fogeynayo.
Waxey hore u diideen iney hanaanka dowladnimo gaarsiiyaan meel ka baxsan caasimada Somaliya oo ay xitaa iyadii hanan waayeen. waxey ka horyimaadeen baarlamaankii Somaliya oo iyaga doortay madaxweynaha Somaliya kedibna markii madaxweynuhu soo doortay wasiirka 1aad ansaxiyey.
Waxey si weyn u diidan yahiin nidaamka federal system-ka oo ku qoran axdi qarameedka dalka u degsan. warar la hubo oo naga soo gaaraya gobolada dhexena waxey hada sheegayaan in xukumada Farmaajo ay ku mashquulsan tahay sidii ay u bur burin laheyd ururka Ahalusuna ee dagaalada ba'an kula jira kooxda Shabaab, arintani ayaan warbixin buuxda ka soo diyaarin doonaa mudo labo maalmood gudahood ah sida ay xukumada Farmaajo ugu lug leetahay arintaan.
Waxey durba ku guuleysteen iney kala jabiyaan culiimadii ku kala sugneyd Caabuud Waaq iyo Dhuuso Mareeb ee isku ujeedada ahaa. waxaa hubanti ah in ay arintaani Somali badan la yaabi doonaan markaan u soo bandhigno qaabka ay hogaanka sare ugu lug leeyahiin arintani.
Dadka u guur gala arimaha siyaasada waxey leeyahiin shaki kuma jiro in xukuamda Farmaajo ay ka mid yahiin aqoonyahano Somaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda jecel laakinse aysan dhinaca siyaasada wax qibrad ah laheyn.waxaa kale oo ay ku mashquulsan yahiin sidii ay mudanayaasha baarlamaanka iskaka hor keeni lahaayeen iyagoo isticmaalayo kaar qabiil.
La soco arinta Ahalusunada gobolada dhexe iyo ku lug lahaanshaha xukumada Farmaajo goor dhaw, inkasta oo ay howshaasi si xawaaro ah ku socoto hadane intii garaankeen ah ayaanu soo bandhigi doonaa,su'aasha u baahan in leys weydiiyo waa xukumada Farmaajo maxey dalka iyo dadka Somaliyeed ku soo siyaadisay?.